Xildhibaanno Katirsan Xisbiga Dimuquraadiga Mareykanka oo ku baaqay in lacasilo Trump.
Saturday August 03, 2019 - 13:10:19 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Khilaafka u dhaxeeya Xisbiyada siyaasadda dalka Mareykanka ayaa cirka iskusii shareeraya xilli Donald Trump uu dhaleecaymo daran kala kulmayo siyaasiyiinta wadankaasi.
Inta badan Xildhibaannada baarlamaanka dalka Mareykanka ee kasoo jeeda xisbiga Dimuquraadiga ayaa taageeray in xil ka qaadis lagu sameeyo Donald Trump oo kasoo jeeda Xisbiga Jamhuuriga ee talada haya.
Warbaahinta Mareykanka waxay sheegtay in guux siyaasadeed oo aad u xooggan uu ka jiro aqalka baarlamaanka, xildhibaannada Dimuquraadiga ah ayaa kala bar doonaya in lacasilo Trump sababa ku aaddan tallaabooyin halis gelinaya jiritaanka Mareykanka oo uu qaaday labadii sano ee uu xafiiska joogay.
Xildhibaannada Xisbiga dimuquraadiga ee taageeray in Trump lacasilo ayaa rumeysan in ololihiisi doorashada ay ku lug laheyd dowladda Ruushka oo doonaysay in ay saameyn dhanka maamulka ah ku yeelato wadanka.
Afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in uu ka walaacsayahay eedaymaha ka imaanaya xildhibaannada, bilihii lasoo dhaafay ayuu Trump bartiisa Twitterka ku weerarayay xildhibaannada Dimuquraadiga ee siyaasaddiisa mucaaradsan.